Fanehoan-kevitra tsindrona - Shenzhen Youde nitranga fahiny ihany
Inona no atao hoe sisiny
Rim dia dingana vaovao lalana ho famokarana habeny lehibe sy be dia be vokatra haingana. Rim dingana dia monomer na mialoha polymer (Pu fitaovana) ao amin'ny ranon-javatra fanjakana miaraka amin'ny sasany arakaraka izay refesina amin'ny paompy ny metering mampifangaro amin'ny fampifangaroana ny lohan'ny iray lasitra. Taorian'ny ireo zavatra mifangaroharo ho nampidirany any an-lasitra eo ambanin'ny ambany tsindry / efitrano hafanana tontolo iainana, dia haingana valinteninao sy ny hazo fijaliana-mampifandray fanasitranana. Rehefa afaka folo minitra hafa, dia ho nanamafy, ary avy eo dia hanafaka azy avy amin'ny bobongolo, fa anisan'ny vokatra no sisiny. Ity dingana ity dia azo notsorina toy ny: fitehirizana, fandrefesana, mifangaro, bobongolo famenoana ary nanasitrana, demould sy ny post-fanodinana.
Fihetsiky ny dingan'ny tsindrona koronosy
roa rano manta fitaovana ampiasaina ao amin'ny dingana sisiny dia voatahiry ao amin'ny sasany roa fitahirizana ny hafanana, fitahirizana dia Matetika tsindry fanaka. Ao amin'ny koronosy, stoste matetika tamin'ny 0.2 ~ 0.3 MPa ambany tsindry ao amin'ny fitahirizana, ary niely foana ao amin'ny fitahirizana, hafanana exchangers sy fampifangaroana lohany. Ary ny polyurethane, ny eo ho eo ny mari-pana ny stoste dia 20 ~ 40 ℃, fanaraha-maso ny mari-pana marina dia ± 1 ℃.
Material for sisiny
General iombonana resin: polyurethane resin, vinyl Ester, amide Ester resin, unsaturated resin, epoxy resin sy ny nentim-paharazana ny ankapobeny fitaovana, sns
Raha ny mahazatra ara-nofo: HD-PU4210, DCP-sisiny, AXSON-Rim 875, sns.
Sal: Ny fanasitranana fotoana dingana sisiny dia tena ny koronosy vokatra ara-nofo sy ny rijan habe fanapahan-kevitra. Ankoatra izany, mila vokatra sisiny mitranga ny fanasitranana faharoa taorian'ny fanafahana avy amin'ny bobongolo. Ary raha Rim dingana dia fifadian-kanina (15-30 minitra / tapa) sy avo-marina tsara, dia mendrika hamokatra be dia be sy be haben'ny vokatra, ary ny haben'ny tapany lehibe indrindra fanariana dia 2000mmX1200mmX1000mm, fa 10KG.